မြသန်းတင့်ရဲ့ စာအုပ် (၄) အုပ်
▄ မြသန်းတင့်ရဲ့ စာအုပ် (၄) အုပ်
ကျနော် စာအုပ်အညွှန်းတွေ အရေးများခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်အညွှန်းတွေထဲမှာ၊ စာအုပ်ဝေဖန်ချက် တချို့ ထည့်ရေးတယ်။ စာအုပ်တွေ အကြောင်းပြောရတာ၊ အကုသိုလ်ကင်းတယ်လို့ ထင်တယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စာအုပ် အကြောင်း၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့စာရေးဆရာအကြောင်း၊ ကိုယ် စိတ်ဝင်စားတဲ့ နယ်ပယ် အကြောင်း…. ပြောရတာ စိတ် အာသာပြေတယ်။ ကိုယ်သိပ်အဖတ်များတဲ့စာရေးဆရာ အကြောင်းဆိုရင် များများ ပြောဖြစ်တယ်၊ များများ ရေးဖြစ်တယ်။ ကျနော့် အာရုံက စာအုပ်တွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်၊ လူတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်၊ လူတွေကနေ တစ်ဆင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွေ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့တွေ အကြောင်း ရောက်သွားတယ်။ ဒါကို ခြုံငုံပြီးခေါ်ရင် နိုင်ငံရေးနဲ့ လူမှုဗေဒပေါ့။
စာအုပ်တွေအကြောင်း ပြောရင်း၊ စာရေးဆရာ အကြောင်း ရောက်သွားတယ်။ စာရေးဆရာ အကြောင်း ပြောရင်း၊ စာရေးဆရာရေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေအကြောင်း ရောက်သွားတယ်။ စာအုပ်နဲ့ စာရေးဆရာ ဆိုတာ တွဲနေတယ်။ စာအုပ် ရယ်လို့ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိပြီး၊ လူထုရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ လူထုလက်ခံမှုကို ရထားမှလည်း စာရေးဆရာဆိုတဲ့နာမည်ကို ပညတ်လို့ ကောင်းတယ် မဟုတ်လား။ သို့မဟုတ်ရင်တော့ ဘယ်လောက်စာရေးရေး စာရေးဆရာလို့ ပညတ်ကြမယ် မထင်။ ဒီနေရာမှာ၊ ဆရာ မြသန်းတင့်ရဲ့ စာအုပ်တွေအကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ စာအုပ်အညွှန်းတွေမှာတော့၊ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ညွှန်းပြီးရေးတယ်။ အခုတော့ ဆရာမြရဲ့ စာအုပ်လေးအုပ် အကြောင်း စိတ်လိုလက်ရ ပြောချင်ပါတယ်။
▣ ၁။ တောင်သမန်ရွှေအင်းက လေညင်းဆော်တော့
မန္တလေးအကြောင်း စာအုပ်တော်တော်များများ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မန္တလေးရဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ သမိုင်း နောက်ခံစာအုပ် ထူထူထဲထဲကို ဆရာမြရဲ့ တောင်သမန်ရွှေအင်းက လေညင်းဆော်တော့… ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကြီးမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်ဟာ မန္တလေးသား။ ဆရာမြဟာ ပခုက္ကူခရိုင်၊ မြိုင်မြို့သား။ ဆရာမြဟာ မန္တလေးသား မဟုတ်ပါ။ မန္တလေးသားစာရေးဆရာတွေထက် မန္တလေးအကြောင်းကို ဝေဝေဆာဆာ၊ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်၊ များများ စားစား၊ မြောက်မြောက်များများ၊ ထူထူထဲထဲ၊ စုံစုံလင်လင်၊ စနစ်တကျ ရေးသွားနိုင်ပါ့လားလို့ ခံစားမိပြီး ပီတိဖြစ်မိ တယ်။ ဒါဟာ မန္တလေးပေါက် စာရေးဆရာတွေကို ထိုးနှက်လိုခြင်း အလျင်း မရှိပါ။ သို့သော် ဆရာ မြသန်းတင့် ရေးခဲ့တဲ့ မန္တလေးအကြောင်း ဆောင်းပါးရှည်ကြီးတွေကို ပေါင်းချုပ်ထားတဲ့ စာအုပ်ဟာ၊ မန္တလေးအတွက်လည်း ဂုဏ်ယူစရာ။ ကျနော်တို့လို စာပေနောက်ပေါက်တွေအတွက်လည်း လေ့လာထိုက်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ကြောင်း တကူး တက ပြောချင်လို့ ရေးလိုက်ပါတယ်။
ဆရာမြရေးသားခဲ့တဲ့ တောင်သမန်ရွှေအင်းက လေညင်းဆော်တော့ ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ၊ စာပုဒ်ပေါင်း (၁၀၂) ပုဒ်ပါဝင်တယ်။ မန္တလေးအကြောင်း ဆောင်းပါးရှည်ကြီးတွေ စုစည်းထားတာလို့ ပြောရင် ရလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ စာအုပ်ကလည်း ထူထုထဲထဲ။ စာမျက်နှာပေါင်း (၇၀၀) နီးပါး ရှိတယ်။ ဆယ်ချိုးဆိုဒ်ကြီး။ မန္တလေးရဲ့ ပါတော်မူခေတ် အခင်းအကျင်းကို အသေးစိတ် ရေးသားခဲ့တဲ့စာအုပ်။ ပါတော်မူခေတ် အကြို ဖြစ်ရပ်တွေကိုလည်း ဖတ်ရတယ်။ ပါတော်မူ အခင်းအကျင်းကိုလည်း ဖတ်ရတယ်။ ကုန်းဘောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်၊ ရတနာပုံ မင်းနေပြည်တွင်းက နန်းတွင်းရေးဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ အဲသည့်ကာလတုန်းက၊ မန္တလေးလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အခင်းအကျင်း ကို နားလည်လိုက်ရတယ်။ နန်းတွင်းဖြစ်ရပ်တွေထဲမှာ၊ မန္တလေးမင်းနေပြည်တွင်းက ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ အထူး သရုပ်ဖော်ချက်တွေကိုလည်း လေ့လာရတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဗြိတိသျှရဲ့ ပြုမူချက်၊ သဘောထားနဲ့ အဲသည့်ခေတ်က နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအတွင်းမှာ ကျင်လည်ကျက်စားခဲ့ရတဲ့ သီပေါရဲ့ သရုပ်၊ ကင်းဝန်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ စုဖုရားလတ်ရဲ့ ဖြစ်အင်တို့ကိုလည်း ခံစားပုံဖော်ထားတယ်။ ဒါဟာ မန္တလေးရဲ့ အတိတ်ဖြတ်သန်းမှုထဲက အထင်ကရဖြစ်ရပ်သမိုင်းကို တစ်ကွက်ချင်းစီ ခြယ်မှုန်းထားတဲ့ သမိုင်းနောက်ခံ စာအုပ်တစ်အုပ်လို့ ပြောရင် ရနိုင်မယ် ထင်တယ်။ အတိတ် မန္တလေးနဲ့ ပဒေသရာဇ်လူ့အဖွဲ့အစည်းလက်အောက်က မန္တလေးရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာကို ခံစားချင်ရင်၊ တောင်သမန်ရွှေအင်းက လေညင်းဆော်တော့…. စာအုပ်ကို သေချာပေါက် ရွေးရမယ် ထင်တယ်။
ဆရာမြသန်းတင့်ရဲ့ အချီး နိဒါန်းမှာ မန္တလေးဟာ ဖီးနစ်ငှက်လို…တဲ့။
• မန္တလေးဟာ ဂရိဒဏ္ဍာရီထဲမှာပါတဲ့ ဖီးနစ်ငှက်နဲ့ တူတယ်။ ဖီးနစ်ငှက်ဟာ ပြာပုံထဲက ပြန်လည် လန်းဆန်း နုပျိုလာသလို မန္တလေးဟာလည်း ပြာပုံထဲက ရုန်းထပြီး နုပျိုလန်းဆန်းလာတာချည်းပဲ။
▣ ၂။ ဧကရာဇ်တို့၏ ဘဏ္ဍာတိုက်များ
စာပေအကြောင်းကို ဂန္တဝင်အတွေးအခေါ်နဲ့ တင်ပြသွားတဲ့ စာအုပ်။ ဒီစာအုပ်ကို တင်ပြတဲ့အခါမှာ၊ အင်္ဂလိပ် စာပေ အနုပညာဝေဖန်ရေးဆရာ ဂျွန်ရပ်စကင်းရဲ့ ဟောပြောချက်ကို ဆရာမြက တင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျွန်ရပ်စကင်းဟာ၊ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ဝါဒ သိပ်အားကောင်းတဲ့အချိန်ကာလမှာ လူဖြစ်ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဂျွန်ရပ်စကင်းဟာ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ ကွယ်လွန်တယ်။ သူဟာ ၁၉ ရာစု တစ်လျှောက်လုံးကို ဖြတ်သန်းလူဖြစ်ခဲ့ရင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်းက နိုင်လိုမင်းထက် ပြုမူမှုတွေနဲ့ အင်အားကြီးသူ အနိုင်ယူတဲ့စရိုက်တွေကို တွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။ စာပေအနုပညာကို သူ့ဝေဖန်ချက်တွေနဲ့ တည့်မတ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြုပြင်ဖို့၊ ပဲ့ပြင်ဖို့ သူ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဂျွန်ရပ်စကင်းရဲ့ စာပေဝေဖန်ချက်ကို ဆရာမြဟာ ဧကရာဇ်တို့၏ ဘဏ္ဍာတိုက်များ ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ရေးသားခဲ့တယ်။
ဂျွန်ရပ်စကင်းရဲ့ ဟောပြောချက်ထဲမှာ၊ စာအုပ်စာပေနဲ့ စာပေလေ့လာဖတ်ရှုခြင်းကိစ္စတွေကို ပြောသွားပြီးတော့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကိုယ့်ကျင့်နဲ့ ပညာ၊ အနုသုခုမရဲ့ တန်ဖိုးဆိုတာတွေကို ထည့်သွင်း ပြောသွားခဲ့တယ်။ ကြီးမြင့်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ဘယ်သို့ဘယ်ပုံဆိုတာမျိုးကို စာပေအနုပညာနဲ့ ဟပ်စပ်ပြီးတော့ ပြောသွားခဲ့တယ်။ ချွတ်ခြုံကျ နေတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ၊ ကိုယ်ကျင့်နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာကို ပြန်လည် ဖြည့်တင်းဖို့ စာပေအားဖြင့် အားဖြည့်ခဲ့တဲ့ ဆရာမြရဲ့ အားထုတ်မှုလို့ ကျနော် ထင်တယ်။ မြန်မာပြည်ဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်မှာ၊ အထွေထွေ ချွတ်ခြုံကျမှုဒဏ်ကို အလူးအလဲခံခဲ့ရတယ်။ အနုပညာလည်း သေ၊ စာပေလည်း သေ၊ ကိုယ့်ကျင့်တရားတွေလည်း မှေးမှိန်။ ဒီလိုလူ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးမှာ၊ ဂျွန်ရပ်စကင်း ဟောပြောခဲ့တဲ့ ဟောပြောချက်ကို ပြန်လည်ရေးသား တင်ပြတာဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်လိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
ကောက်နုတ်ချက် တချို့က အခုလို။
• ကျနော်တို့ဟာ ပညာရှိတွေ ရေးထားခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေရဲ့ အဆုံးအမကို နာခံလိုတဲ့ဆန္ဒ ရှိရမယ်။ သူတို့ အတွေးအခေါ်တွေထဲကို ဝင်ရောက် ကျက်စားလိုတဲ့ ဆန္ဒရှိရမယ်..တဲ့။
• စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုရေးတဲ့ စာရေးဆရာဟာ ကိုယ့်ထက် ပညာမရှိလျှင် ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး…တဲ့။
• လူမျိုးတစ်မျိုးဟာ ပိုက်ဆံသက်သက်ကို ရှာနေတဲ့ ပရမ်းပတာ လူအုပ်သာ ဖြစ်နေလျှင် ကြာရှည်တည်လိမ့် မယ် မဟုတ်ဘူး။ လူမျိုးတစ်မျိုးဟာ စာပေကို အထင်သေးနေလျှင်၊ သိပ္ပံပညာကို အထင်သေးနေလျှင်၊ အနုပညာကို အထင်သေးနေလျှင်၊ ပိုက်ဆံကို ဒီလောက်မက်နေလျှင် အဲဒီ လူမျိုးဟာ ကြာရှည်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး….တဲ့။
▣ ၃။ ခန်းဆောင်နီထဲတွင် အိပ်မက်မက်ကြည့်ခြင်း
ဒီစာအုပ်ဟာ ခန်းဆောင်နီ အိပ်မက် ဝတ္ထုရှည်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာ မြသန်းတင့် ဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့ ခန်းဆောင်နီ အိပ်မက် ဝတ္ထုရှည်ကြီးဟာလည်း၊ အခု ပြန်ဝယ်ဖတ်လို့ မရနိုင်တော့ဘူး။ ဒီစာအုပ် ဘာသာပြန်ဟာ ကြာခဲ့ပြီမို့၊ ပြန်လည် ထုတ်ဝေတာလည်း မတွေ့ရဘူး။ အဟောင်းစာအုပ်တွေထဲက ပြန်ဝယ်ဖို့လည်း မလွယ်တော့ဘူး။ အတွဲ ခပ်များများ ထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ ပြန်လည်စုဆောင်းရင်လည်း အတွဲစုံလိုက် ရနိုင်ဖို့ မလွယ်တော့ဘူး။ ခန်းဆောင်နီ အိပ်မက် ဝတ္ထုရှည်ကြီးကို ဖတ်ဖို့ ချင်ခြင်းသိပ်တက်နေသူအဖို့၊ ဆရာမြ ရေးခဲ့တဲ့ ခန်းဆောင်နီထဲတွင် အိပ်မက်မက်ကြည့်ခြင်း ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါးလေးကို ဖတ်လိုက်ရတော့ နည်းနည်း အာသာပြေသွားတယ်။
ခန်းဆောင်နီအိပ်မက် ဝတ္ထုရှည်ကြီးဟာ ၁၈ ရာစုတုန်းကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ တရုတ်ဂန္တဝင်ဝတ္ထုရှည်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝတ္ထုရှည်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ အသွားအလာနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို အကျဉ်းချုပ် သိလိုက်တယ်။ ခန်းဆောင်နီ အိပ်မက်ဝတ္ထုရှည်ကြီး အကြောင်း ခြုံငုံနားလည်လိုက်ရတယ်။
ခန်းဆောင်နီအိပ်မက် ဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်ချက် တစ်ခု။
• ဒီဝတ္ထုကြီးဟာ အချစ်ဝတ္ထု မည်ကာမတ္တ မဟုတ်ဘူး။ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု၊ တရုတ်တို့ရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို ဖော်ပြတဲ့ ဂန္တဝင် ဝတ္ထုကြီးလို့ ဆိုကြတယ်။ အဲဒီ့ထဲမှာ တရုတ်အမျိုးသားတို့ရဲ့ ဗိသုကာမှု၊ တရုတ်တို့ရဲ့ လူ့ကျင့်ဝတ်၊ တရုတ်တို့ရဲ့ စာပေအရသာခံနည်း၊ ပန်းချီအရသာခံနည်း၊ လက်ဖက်ရည်သောက်နည်း၊ အရက်ချိုသောက်နည်း၊ သားသမီးနဲ့ မိဘက် ဆက်ဆံရေး၊ အထက်အရာရှိနဲ့ အောက်လက်ငယ်သားတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေး၊ ကွန်ဖြူးရှပ်ရဲ့ အဆုံးအမတွေနဲ့အညီ နေထိုင်ရေး၊ တရုတ်တို့ရဲ့ ဒဿနဆိုင်ရာအမြင်၊ တရုတ် လူမျိုးတို့ရဲ့ ဆိုထုံး စတဲ့ အရာတွေ အများကြီးပါတဲ့အတွက် ဒီဝတ္ထုကြီးဟာ တရုတ်အမျိုးသားတို့ ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာတွေကို ဖော်ပြတဲ့ဝတ္ထုကြီး။
ခန်းဆောင်နီအိပ်မက် ဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရုတ်တွေ ပြောစမှတ်ပြုခဲ့ကြတဲ့ မှတ်ချက်။
• ခန်းဆောင်နီအိပ်မက် ဝတ္ထုကတော့ စိတ်ကူးဆန်းကြယ်ပြီး သိမ်မွေ့တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ကူးယဉ်သူတွေ မဖတ်နဲ့….တဲ့။
ခန်းဆောင်နီအိပ်မက် ဝတ္ထုဟာ တရုတ်ပြည်မှာ ဘာ့ကြောင့် ဩဇာကြီးတာလဲ၊ ဘာ့ကြောင့် နာမည်ကြီးတာလဲ၊ တရုတ်ဂန္တဝင်စာပေထဲမှာ ဘာ့ကြောင့် ထင်ရှားတာလဲဆိုတာကို သိလိုက်ရတယ်။ တရုတ်ပဒေသရာဇ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ စရိုက်နဲ့ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးစံတချို့ကို လေ့လာခွင့်ရတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောအကျဆုံးကတော့၊ တရုတ်တွေရဲ့ လူမှုဓလေ့နဲ့ စိတ်နေစရိုက်ကို အကဲခတ် လေ့လာနိုင်တဲ့ တရုတ်စကားပုံတချို့ကို ဖတ်ရှုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ဂန္တဝင် ဝတ္ထုတွေထဲက တရုတ်တွေရဲ့ ညွှန်းဆိုကိုးကားချက်တွေထဲမှာ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင် မော်စီတုန်းဟာ ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံ မြင်တယ်၊ သဘောထားတယ်၊ ကိုးကား သုံးစွဲတယ်ဆိုတာကို ဆရာမြက ရေးသား တင်ပြတယ်။ ဒါကို သိပ်သဘောကျတယ်။ စကားပုံတွေ၊ ဒဏ္ဍာရီတွေ၊ ပုံပြင်တွေ၊ ဝတ္ထုတွေဟာ အဲသည့်လူ့အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ ဓလေ့စရိုက်၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို အကောင်းဆုံး ဖော်ပြနိုင်တဲ့အရာတွေကို နားလည်ထားတယ်။ ဆရာမြရေးခဲ့တဲ့ ခန်းဆောင်နီထဲတွင် အိပ်မက်မက်ကြည့်ခြင်း စာအုပ်ဟာ၊ ခန်းဆောင်နီ အိပ်မက် ဝတ္ထုရှည်ကြီးကို ဖတ်ဖို့ ချင်ခြင်းတက်နေပေမယ့်၊ ဖတ်ခွင့်မရသေးတဲ့ စာသမားအဖို့ စိတ်အာသာပြေစေတဲ့ စာအုပ်လို့ ပြောရင် မမှားဘူး။
ခန်းဆောင်နီအိပ်မက် ဝတ္ထုထဲက မော်စီတုန်း ထုတ်နှုတ်သုံးစွဲတဲ့ တရုတ် စကားပုံ၊ ဆိုရိုး တချို့။
• အနောက်လေက အရှေ့လေကို မလွှမ်းနိုင်ရင် အရှေ့လေက အနောက်လေကို လွှမ်းသွားလိမ့်မယ်။
• ကျားနှစ်ကောင် ကိုက်တာကို တောင်ထိပ်ပေါ်က စောင့်ကြည့်ရမယ်။
• လီပေါင်းတစ်သောင်းရောက်အောင် ပထမခြေလှမ်းက စရတယ်။
• ဖိနပ်သေးနေလို့ ခြေထောက်ကို လှီးပစ်တယ်။
• ကျားနှာခေါင်းကို ကောက်ရိုးနဲ့ သွား ကလိ သလို။
• သွားချင်တဲ့သူကို တားနေလို့ အချည်းနှီးပဲ။
• ကိုယ့်ရန်သူကို တိုက်ရာမှာ ယုန်သူငယ်လို မြန်ပြီး အပျိုရွယ်လို သတိရှိရမယ်။
▣ ၄။ လမင်းကို ထရံပေါက်မှ ကြည့်ခြင်း
မှတ်မှတ်ရရ၊ ဆရာမြသန်းတင့်ရဲ့ စာပေခံစားမှုနဲ့ စာပေအမြင် တချို့ကို မြည်းစမ်းလိုက်ရပါတယ်။ သူ ကြုံကြိုက်ခဲ့ တဲ့ ဖြစ်ရပ်တချို့ကနေ ရေးသားတဲ့ စာပေအမြင်ခံစားမှုနဲ့ သူ ကိုင်စွဲခဲ့တဲ့ စာပေအယူအဆ၊ နည်းနာ တချို့ကိုလည်း လေ့လာခွင့်ရခဲ့တယ်။ လမင်းကို ထရံပေါက်မှ ကြည့်ခြင်းဆိုတာ ဟောပြောချက် ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ရဲ့ နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကို စာအုပ်နာမည် တင်ထားတဲ့စာအုပ်။ စာအုပ်ထဲမှာ စာပေနဲ့ စာအုပ်နဲ့ စာရေးခြင်းကိစ္စတွေနဲ့ စာရေးဆရာတွေရဲ့ ဘဝဖြတ်သန်းမှု၊ ဖြစ်တည်မှု၊ ခံစားမှုနဲ့ သဘောထားကိစ္စတွေနဲ့ စာပေအမြင်အယူအဆ ရှုထောင့်တချို့ကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်းဟာ ဘယ်လိုဘယ်ကဲ့သို့ ဆိုတာလည်း ဖတ်ရတယ်။ ဆရာမြရဲ့ စာပေ အတွေ့အကြုံ၊ ခံစားမှု၊ အမြင်၊ သဘောထားနဲ့ သူ တင်ပြချင်တဲ့ စာမိတ်ဆက် တချို့ ဖတ်ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆရာမြရဲ့ စာပေဘဝကို ဖတ်ရတယ်။ စာရေးဆရာဘဝကို ဖတ်ရတယ်။ ဒီတော့ ကျနော် သဘောကျတယ်။ စာရေးဆရာ အဖြစ် တစ်သက်တာ ရပ်တည်ရှင်သန်ခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာကြီးတစ်ယောက်ဟာ စာရေးခြင်းဘဝကို ဘယ်လို ယူဆသလဲဆိုတာ ကျနော့်အတွက်တော့ အရေးတကြီး သိစရာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့်အတွက် မှတ်မှတ်ရရ ခေါင်းထဲစွဲနေတဲ့ အရာ (၃) ခု ကတော့၊ မြင်းကို အတင်းရေသောက်ခိုင်း၍ မရနိုင်….ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးရယ်၊ လမင်းကို ထရံပေါက်မှ ကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးရယ်၊ ဂျွန်ရပ်စကင်း ပြောတဲ့ စကားရယ်။ ဒီသုံးခုက စိတ်ထဲမှာ သိပ်စွဲနေတယ်။
အဲသည့် ဆိုလိုရင်းက အခုလို။
• ကိုယ့်တွင် ငွေကြေးတတ်နိုင်သဖြင့်၊ အပေါင်းအသင်းကောင်းသဖြင့် စာအုပ်တွေ ထွက်ကောင်း ထွက်ပါလိမ့်မည်။ စာဖတ်ပရိသတ်ကလည်း ဖတ်ကောင်းဖတ်ပါလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် သူ့ကိုမူ စာရေးဆရာ ဟု အသိအမှတ်မပြုပါ။ စာဖတ်ပရိသတ်ကိုလည်း စာရေးဆရာအဖြစ် အတင်း လက်ခံခိုင်း၍ မရပါ။ သူ လက်ခံချင်မှ လက်ခံချင်မှ ဖြစ်ပါသည်။ မြင်းကို ရေဆိပ်သို့ ဆွဲသွား၍ ရပါသည်။ သို့ရာတွင် မြင်းကို အတင်းရေသောက်ခိုင်း၍ မရပါ။
• လူငယ်အရွယ်မှာ စာဖတ်ရတာဟာ လမင်းကို ထရံပေါက်ကြား၊ နံရံအက်ကြားက ချောင်းကြည့်ရတာနဲ့ တူတယ်။ လူငယ်ဆိုတော့ အတွေ့အကြုံ မရင့်သန်သေးဘူး။ အတွေးအခေါ် မလေးနက်သေးဘူး။ ဒါ့ကြောင့်မို့ ရိုးတိုးရိပ်တိတ်ပဲ မြင်လိုက်ရတယ်။ လူလတ်ပိုင်းအရွယ်မှာ စာဖတ်ရတာဟာ လမင်းကို အိမ်ရှေ့တလင်းပြင်က ရပ်ကြည့်ရတာနဲ့ တူတယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို မြင်နိုင်ပြီ။ လရောင် ဘယ်လောက်လင်းသလဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လရောင်ဖြာပုံဟာ ဘယ်လို အနေအထား ရှိသလဲဆိုတာ အကဲခတ်ခွင့်ရပြီ။ လူကြီးပိုင်းမှာ စာဖတ်ရတော့ လမင်းကို လသာဆောင် ဝရန်တာပေါ်က တက်ကြည့်ရတာနဲ့ တူတယ်။ ကိုယ့်နောက်မှာ အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီး ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်ပြီ။
အင်္ဂလိပ် စာပေအနုပညာ ဝေဖန်ရေးဆရာ ဂျွန်ရပ်စကင်းက၊ အင်္ဂလိပ်တွေ ဗြိတိသျှအင်ပါယာကြီးကို အစွမ်းကုန် ချဲ့ထွင်နေတဲ့ ၁၉ ရာစု အလယ်ပိုင်းကာလလောက်မှာ၊ ကြီးမြတ်တဲ့လူမျိုးဆိုတာကို အနက်ဖွင့်ပြီး ဝေဖန်တဲ့ စကား ဖြစ်ပါတယ်။
• ကြီးမြတ်တဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးဟာ သစ်ကြားသီးခြောက်လုံးလောက် ခိုးမိတာနဲ့ ကလေးတွေကို ထောင်ထဲ မပို့ဘူး။
• ကြီးမြတ်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဟာ ဒီစစ်ပွဲမှာ ဘယ်ဘက်က မှန်သလဲ၊ ဘယ်ဘက်က မှားသလဲဆိုတာကို မကြည့်ဘဲ၊ ဒီစစ်ပွဲပြီးရင် ငါတို့ ကုန်အရောင်းအဝယ် ဘယ်လိုနေမယ်၊ ငါတို့ အမြတ်တွေ ဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပဲ တွေးပြီး စစ်မြေပြင်မှာ လူငယ်တွေ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ သေနေကြတာကို လက်ပိုက်ကြည့်မနေဘူး။
• ကြီးမြတ်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဟာ ပိုက်ဆံပေးမလား အသက်ပေးသမလား ဆိုတဲ့ လမ်းဓားပြတို့ထက် ပိုကဲပြီး ပိုက်ဆံရော၊ အသက်ရော ပေးလို့ နှစ်ခုစလုံးကို တောင်းနေတဲ့ ဓားပြအကြီးစားတွေ ဓားပြတိုက်နေတာကို ဒီအတိုင်း လက်ပိုက်ကြည့်မနေဘူး။
စာအုပ်စာပေတွေထဲ ခေါင်းတိုးနေရတာဟာ၊ ဘဝ အပူ၊ လူ့သောက အပူတွေကို ဖြေဖျောက်လိုက်ရသလိုပါပဲ။ အတိတ်က စာပေတွေထဲက စကားရပ်တွေဟာ လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်ကို မှန်ထောင်ပြသလို ပါပဲ။ စာဖတ်ခြင်းဟာ စိတ်အပူကို ဖြေဖျောက်ခြင်းလည်း ဖြစ်တယ်။ အတိတ်ကို ပြန်ကြည့်ပြီး၊ ပစ္စုပ္ပန်ကို နားလည်အောင် လုပ်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ စာအုပ်တွေထဲက လူကို လေ့လာရင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ သရုပ်မှန်ကို တွေ့လာရတာဟာ၊ ကျနော်တို့ ဉာဏ်ကျက်စားခြင်းရဲ့ အကျိုးရလဒ်လို့ ယူဆပါတယ်။
၃၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၂၁။
Publisher Name: Save The Library
ငါပြောချင်သမျှ ငါ့ အကြောင်း
ပျူ ​တွေ ဘယ်​​ပျောက်​သွားသလဲ
ဂျဝါဟာလားနေရူး၏လျှပ်တစ်ပြက်ကမ္ဘာ့​သမိုင်း ( ရှေးဟောင်းနှင့်ခေတ်အလယ်ပိုင်း )